Microsoft Surface Book Review - Izindaba Rule
INcwadi Surface kungenye yezindlela ezingcono kakhulu Windows 10 laptops. Kodwa eceleni ucezu kuyinto engaphezu gimmick. Lapho bathinteka emzimbeni screen kwenza ehloniphekile, uma ibingaba eyesikhashana ngempela, tablet lokho super slim futhi kulula ubambe.
Laptop kuqala, tablet yesibili, lena inhlanganisela best of a 2-in-1 umshini wonke amandla PC umnyuziki isibambo ku 7.7mm tablet
Lesi sihloko osesikhundleni “Microsoft Ukubuyekeza Surface Book: the best Windows laptop, isikrini detachable” kwalotshwa Samuel Gibbs, ngoba theguardian.com ngoLwesine-25 Febhuwari 2016 07.00 UTC
INcwadi Surface ungowokuqala umugqa omusha we-laptops kusuka Microsoft nge twist, isikrini kuza off.
Surface Pro line Microsoft abaqala clunky: big, esindayo futhi kunalokho ezimbonini design. The latest Surface Pro 4 kuba ohlabayo futhi abafaneleka kangcono, kodwa pretty okuningi okufanayo: Windows 10 tablet ye-esikhiphekayo.
Kodwa iNcwadi Kwengaphandle iyisilwane ohluke ngokuphelele: a laptop kuqala, tablet yesibili. Kuzwakala Ukuhlukaniswa obungavamile, kodwa kwenza impela umehluko uma keyboard umshayeli wakho oyinhloko we-computer.
Laptop kuqala, tablet yesibili
Isikrini detaches kusukela base laptop ukuze abe tablet. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Ekhuluma ikhibhodi, akusikho nje isesekeli oyisimungulu. It egcina ibhethri elikhudlwana, i slot ikhadi le-SD, ezimbili USB 3.0 namachweba ngenhloso, DisplayPort mini futhi magnetic ukushaja izisekelo. Kodwa kungaba futhi abe ngokuqhubekayo ihluzo ikhadi ngaphakathi it, kuye ngokuthi imodeli, enikeza Book Kwengaphandle ibhodle ngokwengeziwe uma kudingwa.
Ingxenye esele Ukusebenza computer zifakiwe screen, okwenza kube nakakhulu kuba nje mncane kangakanani.
Isikrini kanye ikhibhodi axhunyiwe by fancy lomnyango Fulcrum ukuthi Rolls out esikhundleni nje pivoting. Lolo hide luqala ngo ubude kumila ikhibhodi ibhalansi kangcono isikrini, ngaphandle kokuba ziwenza.
Kubukeka uyinqaba, cishe cool, futhi empeleni isebenza kahle. Akukona emaceleni ngempela Kudala ezinye laptops, kodwa kuze kube ngokwanele ukubukwa ntofontofo at a desk.
Ikhibhodi screen enziwa grey magnesium ingxubevange, olubheka futhi uzizwa nice, kodwa amamaki kalula. Esikhathini esifishane ne Book Kwengaphandle Ngiye ngaphawula imihuzuko on abangaphansi ikhibhodi uphawu lip naphezu kokunakekela kahle.
Lapho wavala, the lomnyango akusho phinda flat, esikhundleni it has a gap mayelana ububanzi umunwe edala simise uqhekeko ukuthi tapers kusukela 22.8mm iphuzu of 13mm obukhulu.
Namathisela ithebhulethi reverse tetfulo screen Ukugunda noma ukubukela ividiyo ebhanoyini. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Screen: 13.5e LCD 3000 x 2000 (267 ppi)
Amagama: Intel Core i5 noma I7 (6isizukulwane th)
Isitoreji: 128, 256 noma 512GB
Ikhamera: 8ILUNGU LEPHALAMENDE bakhulise, 5ILUNGU LEPHALAMENDE ebheke phambili
Ukuxhumana: Wi-Fi, Bluetooth, USB 3.0, SD, DisplayPort mini
Laptop Ubukhulu: 232.1 x 312.3 x 22.8mm
Laptop isisindo: 1.52 noma 1.58Kg
Tablet Ubukhulu: 220.2 x 312.3 x 7.7mm
Tablet isisindo: 726g
Ukubanjwa screen kuhlehlela nyova base laptop kuyivumela ukuba eligoqiwe emuva phansi ikhibhodi, labetibambile engela lokubhala lula ngothi lokuloba. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Njengoba ungase expect, singamashekeli ayikhulu Microsoft-ezenziwe machine, Encwadi Surface ugijima Windows 10, okuyinto iyona engcono Windows version kuze kube yimanje.
Isofthiwe akusho ngempela uneminye ukulungisa ethile noma customisations for the Book Surface ukuthi awatholakali kunoma isiphi esinye Windows 10 convertible.
Uhlelo lokusebenza kokubili ocacile lokudlela ngezabelo elinganayo. Indlela engcono kakhulu ukuchaza kuba yesimanje, lulungiswe interface yomsebenzisi egqinsiwe ngokuqondile phezu Windows efanayo ubudala.
Ukuhambahamba, sethula izinhlelo kanye ibhizinisi nsuku zonke usebenza kule ungqimba phezulu futhi ngobuqotho lula impela ukuyisebenzisa futhi ewusizo. Kodwa uma udinga ukushintsha into ebucayi, khipha uhlelo desktop Ngokwesibonelo, Uyithola booted emuva zingene efanayo Control Panel ngiyakhumbula kusuka Windows 2000 – iye alishi-.
Akuve onamandla, kunjalo, futhi ungathola ukuthi yini okudingeka ukuthi kwenziwe kuwe, kodwa umehluko phakathi kwento elibalulekile Windows 10 ungqimba kanye underworkings ngempela jarring. Ngoba engaqaliwe Ngiyasola kwakungase kube impela Okumangaza, ikakhulukazi uma usebenzisa umunwe wakho ngesikhathi ngokungazelelwe baye badonsa on emabhokisini encanyana.
Ukuze uthole olunye ulwazi lwe-Windows 10 funda:
Windows 10 Ukubuyekeza - version yokugcina Windows kungase kube Microsoft best ezake
Kukhona umbhangqwana sezinto ukuphawula for the Book Surface. Owokuqala uthi Windows Sawubona, okuyinto ibona ubuso bakho futhi izingodo nawe ngaphandle amaphasiwedi, kuhle futhi usebenza ngokushesha njengoba computer kungaba ivuleke.
Kuvuselela tablet mode usiza uma uzama badonsa izinto noma sebenzisa Book Kwengaphandle njengoba tablet.
INcwadi Surface yinhle, lesinqumo high and screen pixel-ekhasa ine engele okukhulu kwehlwaya kanye ubukeka brilliant, uze ufinyelele uhlelo lokusebenza ukuthi abangeke bakwazi ukucaca kahle. Ukube bekunjalo bagcina ubuka icons ukufiphala nombhalo – nesipiliyoni ngempela, owawungumnyaka kuvamile ukusetshenziswa yami bekhompuyutha izinhlelo Windows ezifana Evernote, abahleli ahlukahlukene umbhalo kanye nezinye izinhlelo.
Izinhlelo ezivela esitolo Windows musa uhlushwa inkinga efanayo, kodwa ngokuvamile bengekho njengoba enamandla. Evernote Touch uyisibonelo esihle, kodwa kungcono kunokuba izama usinge lokudlela ukufiphala.
ikhibhodi INcwadi Surface kanye isiqeshana sokuhambisa iminwe zinhle kakhulu. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Ngokuyinhloko, eNcwadini Ebusweni iyona engcono kunazo Windows laptop engake esetshenziswa. Isikhathi. Akuve fast, ine omuhle kakhulu ikhibhodi ekhanyayo, isiqeshana sokuhambisa iminwe ayisimanga, namachweba akhona ngokwanele futhi kungcono kuqhathaniswa ukukhanya nje phezu 1.5kg.
Ezinye laptops Windows kukhona ohlabayo, abanye alula, kodwa akekho abe akamuhle kangako inhlanganisela kwesikrini, ikhibhodi, amandla kanye design zezimboni.
Ngakwazi ukuthola ukuthi ube nosuku oluhle nisebenzela kuwo kwamandla ebhethri bese namanje kwadingeka ngokwanele ukuba kancane ukufundwa ukukhanya on ekhaya ngesitimela nedivaysi.
Kuyaphawuleka, nakuba into eyenzeka Book Surface, ukuthi ukukwazi isikrini okufakwayo kuyinto enhle, ngisho nalapho ukwenza izinto isidina like ukuthayipha, njengoba ezihamba isikhombisi azungeze kunjalo ngokushesha okuningi kunalokho usebenzisa isiqeshana sokuhambisa iminwe.
Lesi sibhebhe ilula ngokwanele ukuba ubambe isikhashana ngesandla esisodwa, kodwa mikhulu. Uneminyaka akunakwenzeka ukuba ashiye ekhaya nje tablet ingxenye Book Surface. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Lesi sibhebhe sibizwa ibambelele ikhibhodi ngumuntu fancy kakhulu "inkumbulo wire" locking mshini, eshintsha shape uma wamanje sisetshenziswa yonkana it. I mshini electronic: ngokucindezela inkinobho on the keyboard noma i icon esibukweni disengages ithebhulethi.
Kufanele donsa ngqo phezulu nhlangothi zombili ngenkathi ebambe ikhibhodi phansi. It sounds kanzima, kodwa akuyona. Ifaka kumane icala plonking kwesikrini phezu izixhumi. I grip ababili nomunye ngokuzenzakalelayo.
Isikrini zingafakwa noma kunjalo nxazonke phezu base ikhibhodi, okusho like a laptop noma okuhlanekezelwe, ngakho-ke kungenziwa eligoqiwe phansi like incwajana imphakamisele kwedeski noma basukuma njengeqembu umbukiso.
Kuyaphawuleka ukuthi amaphilisi kuphela zisuswe ngenkathi iNcwadi Surface inamandla, okusho aluba lusifa ezandleni zakho ke akukho reattaching ke noma detaching it flip kuyo ukuyivala kahle.
Isikrini kuyinto ebukhali kakhulu, belingana iPad noma Google Pixel C, ngenkathi yayo 3:2 aspect ratio kusho kumayelana ubukhulu bit A4 iphepha. Amawebhusayithi, emakhomikhi netincwadzi tekufundza bonke abheka kuwe enkulu. It has izikhulumi ezimbili ebheke phambili ukuthi kukhona bha ukubukela ividiyo, kanti headphones echwebeni in the tablet, hhayi ikhibhodi.
Isikrini 13.5in kusho ngokuphawulekayo ezinkudlwana zayo kunamanye amaphilisi kakhulu futhi ngezinye 726g kungcono futhi pretty esindayo. Naphezu kokuba PC-ngesihluku umnyuziki kusenzima 7.7mm kwaphela, okuyinto ngempela kusishiya sibambe ongezansi. Yilokho ohlabayo kuka Smartphones iningi.
Ngakwazi ukuthola cishe izingxenye ezintathu amahora yokuphila Ukufundwa aphume tablet nge ukugqama ehloniphekile. Microsoft yalandisana it uyakwelula amahora amane ukudlala ividiyo. Lesi sibhebhe kungabuye likhokhelwa eceleni kusukela ikhibhodi, Kufanele udinga ukuba.
The ethile enkulu a PC njengoba tablet wukuthi iyashesha nebunjalo baletinye amaphilisi iningi akamuhle osheshayo-Windows. Kungaba ambalwa uma wavala phansi hhayi nje silele, okuyinto it enza ngemva kwenkathi isethi.
Ine 1,024 levels of pressure sensitivity and really does feel like a pen on paper. The nib can also be changed if you prefer a harder or softer feel.
Ukuze uqhathanise, Apple’s 13in MacBook Pro (just laptop) starts at £900, Dell’s XPS 12 2-in-1 starts at £899 and Asus’s convertible T300CHI £800.
A dock is available to turn it into a pseudo-desktop, with ethernet, USB, headphones and multiple mini DisplayPorts. Nokho, a monitor that worked fine when plugged directly into the Surface Book wouldn’t work when plugged into the dock.
Buhle: excellent keyboard, decent trackpad, brilliant screen, great stylus, 13-hour battery, fancy hinge, great 2-in-1 compromise, proper ports, Windows Sawubona
Bawo: Windows has a tablet app gap, software bugs, ezibizayo, tablet-only battery could be longer, heavy for a tablet, HiDPI mode fails for desktop apps, interface is a mess if you dig deep enough
Isigaba, Computing, Gadgets, Aphathekayo, Microsoft, Microsoft Surface, Izibuyekezo, Samuel Gibbs, amakhompyutha Tablet, Technology, Windows, Windows 10
← I Esanda Technology Insane futhi Inventions [VIDEO] Ingabe Lo Ikusasa Work? →